South Africa Inowedzera Makore Mana Chirongwa cheZimbabwe Exemption Permit
Gunyana 08, 2017
Zimbabweans rally against recent anti-immigrant violence in South Africa, outside the South African embassy in Harare, April 17, 2015.
Hurumende yeSouth Africa yaparura chirongwa chitsva chekubatsira zvizvarwa zveZimbabwe zviri kugara munyika iyi kuti zviwane magwaro anozvibvumidza kugara nekushanda zviri pamutemo.
Gurukota rezvemukati meSouth Africa, Amai Hlengiwe Mkhize, vazivisa kuti chirongwa cheZimbabwe Special Permit, icho chaive nemakore matatu, chiri kupetwa musi wa21 Zvita gore rino, chichatsiviwa nechimwe chitsva chinonzi Zimbabwe Exemption Permit.
Hurongwa hwekunyorera magwaro matsva aya hunonzi huri kutanga musi wa 15 Gunyana huchipera musi wa30 Mbudzi gore rino, uye magwaro aya anenge achitanga kushanda kutanga kwaNdira 2018 kwemakore mana anotevera.
Mumashoko avo kuvatori venhau, Amai Mkhize vati zvirongwa zvekubatsira zvizvarwa zveZimbabwe izvi zviri kubatsira zvikuru mukugadzikana kwemukati menyika, uye kufambiswa kwakanaka kwemabasa ekutarisa vauyi.
Vatiwo zvinobatsira nyika yavo munyaya dzekuumba upfumi hwenyika sezvo zvichikwezva vanhu vekunze vane hunyanzvi, avo vanozodzidzisawo zvizvarwa zvenyika yavo.
Vati vachakwanisa kutambirwa muchirongwa cheZimbabwe Exemption Permit ichi vanhu vanoda kusvika mazana maviri ezviuru vanga vaine magwaro eZPS chete, uye vanotarisirwa kubhadhara mari inoita chiuru chemarhanzi.
Mukuru weZimbabwe Exiles Forum, Va Gabriel Shumba, vanoti vafara zvikuru nezvaitwa nehurumende yeSouth Africa.
Hurukuro naVa Gabriel Shumba